WhatsApp Emojis iyo Emoticons oo macne leh - EmojisWiki.com
Dhaqdhaqaaqa iyo Ciyaaraha
WhatsApp Emojis iyo Emoticons oo macne leh
Dareenka dareenka ayaa la sameeyay sannadkii 1990-kii waxayna ahaayeen tallaabo weyn oo lagu beddelay habka dadku u wada xiriiraan iyagoo isticmaalaya warbaahinta dhijitaalka ah. Tan iyo markii ay asal ahaan ka soo jeedaan waxay gacan ka geysteen inay macno wanaagsan siiyaan fikradaha waxayna kuu oggolaanayaan inaad u muujiso shucuurtaada ama dareenkaaga si ballaadhan.
¿Ma ogtahay inaad ka heli karto boqolaal emojis kiiboodhkaaga dhijitaalka ah?? Kuwani waxay si dabiici ah u beddelaan calaamadaha muddada dheer loo isticmaalay si ay u matalaan tibaaxaha qaarkood sida dhoola cadeynta, qalbiyada, ama qosolka weyn. Kuwani waa wejiyo yaryar oo leh tibaaxo aan dhammaad lahayn.
Sababo la xiriira kor ku xusan, maqaalkan waxaan ku faahfaahinaynaa liiska emoticons macnahooda, waxaad ogaan doontaa waxa Emojis yihiin, waxa loo isticmaalo, kuwaas oo ah kuwa ugu caansan iyo in ka badan.
Liisaska emojis iyo emoticons oo macne ahaan u leh qaybaha WhatsApp iyo Facebook
WhatsApp Cunnada iyo Cabbitaanka Emojis iyo Emoticons oo macne leh
Emojis iyo Emoticons ee Calaamadaha WhatsApp oo macne leh
Emojis Xayawaanka WhatsApp iyo Emoticons oo macne leh
Waxqabadka WhatsApp iyo Emojis Emojis iyo Emoticons oo macne leh
Emojis iyo Emoticons ee Walxaha WhatsApp Macnaha leh
Safarka WhatsApp iyo Goobaha Emojis iyo Emoticons oo Macno leh
WhatsApp Dadka Emojis iyo Emoticons oo macnahooda leh
Waa maxay emoticons ama emojis?
Dareenku waxay la xiriiraan jilayaasha loo isticmaalo gobolada ama farriimaha elegtarooniga ah iyo aaladaha internetka sida Instagram, WhatsApp ama Facebook oo matala shucuurta, rabitaanka, fikradaha ama dareenka aadanaha qaab muuqaal ahaan ka duwan.
Sida aan ku muujinay bilowgii asalkiisu waa japan Eraygeeduna wuxuu u qoran yahay sida 絵⽂字 oo ka kooban xarafka "e" iyo ereyga "moji". Kuwani waxay noqdeen kuwo caan ah oo xitaa akadeemiyada qaarkood waxay u qaateen si dhab ah iyagoo qaarkood u doortay kuwa hadalka sanadka in 2015.
Abuuritaanka muuqaalladan muuqaallada ah waxaa inta badan loo aaneynayaa Shigetaka Kurita. Waad ku mahadsan tahay tan, isticmaalayaasha wakhtigaa waxay matalaan dhammaan xaaladaha iyaga oo isticmaalaya 160 xaraf oo fariimaha la oggol yahay.
Asal ahaan Emoji waxay ku koobnayd cabbirrada 12 x 12 pixels inta badan ay sabab u tahay xaddidaadda tignoolajiyada garaafyada ee waqtiga. Maadaama sawiradan muuqaalku aanay hoos imanayn xuquuqda daabacaada, iibiyayaal badan oo Japan ah ayaa qaatay fursad ay ku abuuraan sawiradooda.
Waad ku mahadsan tahay kuwa kor ku xusan, maanta calaamadahan waxaa loo adeegsadaa si joogta ah waxayna si weyn u caawiyaan marka la qorayo fariin kasta.
Maxaa loogu isticmaalaa WhatsApp iyo Facebook?
Emojis ayaa markii hore lagu isticmaalay fariimaha qoraalka ah si ay garaaf ahaan u matalaan dareenka qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, isbeddellada tignoolajiyada ee maanta. ku dar fikrado laga soo qaatay mowduucyo kala duwan si aad u muujiso xaalado nololeed oo kala duwan sida ugu macquulsan.
Gobollada WhatsApp, Facebook iyo Instagram aad bay faa'iido u leeyihiin, iyo sidoo kale dhammaan sheekeysiga in aad muujiso shucuur ay ka mid yihiin farxad, xiiso, rajo, jacayl, kibir, degganaan, mahadnaq, dhiirigelin, faan iyo qaar kale oo badan. Waxay sidoo kale ku siinayaan tas-hiilaad aad ku muujiso dareenka sida farxad, jacayl, naxariis, yaab, kaftan, murugo, xanaaq, iyo kuwo kale.
Tusaale ahaan kuwa kore, waxaad isticmaali kartaa wejiyada ka muuqda kiiboodhka dhijitaalka ah si aad u muujiso inaad dareento murugo qoto dheer sabab qaar ka mid ah. Sidoo kale Waxay kuu fududeynayaan inaad muujiso daqiiqadahaaga farxadda ama isbeddel ku yimaada niyaddaada.
Sawirradani waxay kaa caawinayaan inaad yarayso tirada erayada aad rabto inaad muujiso, sida fikradda socodka, dukaamaysiga, seexashada, cunista saxan macaan, iwm.
Waa maxay emoji-yada aadka loo isticmaalo ama emoticons ee gobolada Facebook iyo WhatsApp?
Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa qaar ka mid ah emojis-yada ugu caansan WhatsApp iyo Facebook statuss iyo sidoo kale Instagram.
Haddii aad dareento jacayl qof, aad rabto in aad noqoto Romantic ama aad la yaabto quruxda qof ama shay, waxaad isticmaali kartaa dareenka jacaylka. Waji farxad leh oo laba qalbi indhuhu ku jiraan ayaa lagu soo bandhigayaa.
Mid kale oo ka mid ah calaamadaha aadka loo isticmaalo waa emoji cabsi leh ama qaylinaya., waa waji yaab leh oo ka dhigan cabsi ama argagax oo aad u isticmaali karto si aad u gudbiso aragti ama saameyn.
Emoji wiingaya waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah siyaabaha ugu xun ee lagu tuso dhiggiisa inaad tahay la-socod wax ama si fudud ugu martiqaad ciyaarta.
Haddii aad rabto inaad soo gudbiso murugo, waxaa jira weji ooyaya oo si fudud u muujinaya. Waa walaac qoto dheer oo ku caawin kara waqtiyada ugu adag.
suulka kor ayaa faa'iido leh si loo muujiyo heshiis, ogolaansho ama ogolaansho ficil ama fikradda kuwa kale.
Waxa kale oo aad ka heli emoji ama weji cajiib ah aad u faa'iido leh in la gudbiyo shakiga ku saabsan fikradda ay keeneen dhinacyo saddexaad. Waxa u taagan weji gaalnimo, oo leh daboollo dabacsan.
Calaamadda oohinta qosolka ama farxadda sidoo kale waa caan sababtoo ah waxay kaa caawineysaa inaad muujiso farxad xad dhaaf ah, qosol ama waxay muujisaa inaadan joojin karin qosolka shay. Waxaad si sahal ah ku garan kartaa wajigiisa dhoola cadeynaya oo leh laba dhibcood oo mid ka mid ah isha kasta.
Sawirada kale ee ugu caansan waa wajiga dhunkashada wadnaha. Waa waji shumis dira waana sawir jacayl oo qof walba dareensiin kara.
Qoob-ka-cayaaraha Flamenco waa calaamad muujinaysa rabitaanka inaad aado xaflad. Waxaad u isticmaali kartaa si qumman si aad u muujiso inaad rabto inaad ka baxdo gurigaaga dhowr saacadood oo aad qaadato wakhti fiican.
Maxay muhiim u tahay in la ogaado macnaha saxda ah ee emoticons ama emojis?
Mararka qaarkood dadku waxay u wadaagaan macnaha emojis si khaldan, ha ahaato macluumaad la'aan ama sababtoo ah deegaanka dhaqameed ayaa siisay isticmaal ka duwan wakhti dheer, taas oo u horseedaysa korsashadooda aan loo simanayn.
Xaqiiqdu waxay tahay in emoticon kasta uu leeyahay magac rasmi ah waa meesha aad ka bilaabeyso in aad macnaha ka siiso deegaanka aad isticmaalayso, hadii kale waxaa dhici karta in ay isfaham la’aani dhacdo oo ay dhibsato, ku raaxaysanayso amaba ceeb in aad fahanto waxa uu ula jeedo wejigaas yari.
Tusaale ahaan, waxaa jira qaar ka mid ah tusaalayaal muujinaya maahmaahyada Shiinaha sida kuwa saddexda daanyeer. Taas macnaheedu waxa weeye xumaan ha arag, xumaanna ha maqlin, xumaanna ha ku hadlin, haddana dadku waxay si gaar ah u adeegsadaan wejiyadan si ay u muujiyaan murugada, dheygagga, ama si ay u qariyaan.
Astaanta dumarka leh dhegaha bakayle waxay la mid yihiin dareenka, laakiin dadku waxay inta badan isticmaalaan emoji-gan si ay u muujiyaan madadaalo, raynrayn, ama xataa farxad. Tani gaar ahaan kooxaha asxaabta ama asxaabta waxaana ku jira shabakadaha bulshada sida Facebook, Instagram ama WhatsApp.
Marka ay timaado in la matalo oohin, yaab ama cabsi, dadku badanaa waxay isticmaalaan emoji wejiga iyagoo gacmahooda ku haya dhabannada. Si kastaba ha ahaatee, calaamadani waxay la xiriirtaa shaqada caanka ah ee Edvard Munch.
Waxa kale oo aad ka helaysaa calaamadda saxarada, taas oo mararka qaarkood iska dhigaysa jalaatada shukulaatada kiriimka leh. Runtu waa taas abuurkeedu waxa uu la xidhiidha dhaqanka Japan waxayna u taagan tahay nasiib wacan.
Sida aan ku sharaxnay tusaalooyinkii hore, emoticon kastaa wuxuu leeyahay macne u gaar ah, inkastoo dadka intooda badan ay bixiyaan iyaga u gaar ah. Laakiin had iyo jeer waa muhiim in la tilmaamo sida ay tahay si isgaarsiintu u noqoto mid dareere ah oo aan fariimaha la fahmin.
© 2022 EmojisWiki.com Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiinSiyaasadda cookies Cidda aan nahay